ချိုသင်းတို့ဆီမှာတော့ မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အစားအစာကိုတောင် လု စားနေကြတာပဲ။ ဘာ တာဝန် မှ မယူတဲ့အပြင်လေ။ အကို့စာလေး ဘိုကလေးကလူတွေ ဖတ်ရရင် အကိုညာတာ ထင်မှာ။
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတာခြင်းတူပေမယ့် အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရခြင်းမတူတော့....
ဖတ်ရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ သွေးပျက်စဖွယ်မြင်ကွင်းတွေကိုပဲ ပြန်မြင်ယောင်နေမိပါတယ်..
အခုချိန်ထိ... ဘယ်တော့မှလဲ အခြေကျနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးးး
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး...အကို စာဖတ်နေရင်းနဲ့ ကို မြင်ကွင်း၂ခု တစ်ပြိုင်တည်း မြင်နေရတယ်ဗျာ...။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လူတွေကံဆိုးပါတယ်.
လူအသိဥာဏ် မရှိသူတွေ အုပ်ချုပ်သမျှ ဒုက္ခတွေချည်းပါဘဲ...။
တာဝန်ယူမှုတွေ မရှိသရွေ့တော့ သဘာဝမုန်တိုင်းတွေရော လူလုပ်မုန်တိုင်းတွေပါ ထန်နေဦးမှာပါပဲ။
အန်ကယ်တို့ မိသားစု အခု အဆင်ပြေကြတယ်ဟုတ် ဒါဆိုဝမ်းသာပါပီး အဘတို့ အကြောင်းကတော့..................
ကျမ က ခုမှ ဒီဘလော့ဂ် လောကထဲ
မကြာ မကြာ လာလည်ပါ့မယ်..။
brother,where r u state in usa ,now???
ချိုသင်းရေ သူတို့တွေက သံတွေခဲတွေ စားနေကြတာပါ။
မျိုးဝင်းဇော် - နှိုင်းယှဉ်လေ အဘတို့ကို နားရင်းရိုက်ချင်လေ ဖြစ်လာတယ် မဟုတ်လား။
myatnoe - အားလုံးက စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြတာပါပဲဗျာ။ ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ။
thorn museum - အိမ်ပြောင်းတာကတော့ ပြောင်းစရာ ဖြစ်လာလို့ပါ ကိုသစ်ရေ။ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကြီးကိုတောင် နေရာ ပြောင်းပစ်လိုက်ချင်သေး။
pandora - မုန်တိုင်းတွေ ထန်နေသေးသမျှ .... အင်း... သက်ပြင်းတောင် မချရဲတော့ပါဘူး။ အသက် အောင့်ထားမိတယ်။
တူမောင်မျိုး - အဆင်ပြေအောင် လုပ်ယူရတာပေါ့ကွယ်။
တို့ ပြည်က လူထုတွေမှာသာ ...
mama - လာလည်ပါဗျာ။
oway aung - ညီရေ့ အကိုက ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ